Jaakadaha & Jaakadaha
Kani waa jaakad qurux badan oo caadi ah, oo ka samaysan fiber superfine maadada synthetic. Ultrafine PU maqaar dardaro waa jiilka saddexaad ee maqaar macmal ah iyo nin-sameeyey. Dharka aan-tol-qabka lahayn ee saddex-cabbirkiisa iyo qaabdhismeedkiisa meed ayaa abuuraya xaaladda maqaar-gacmeedka si uu uga sarreeyo maqaarka dabiiciga ah ee maaddada salka. Shayga oo ay weheliso impregnation cusub oo PU slurry impregnation leh qaab dhismeedka furitaanka iyo farsamada farsamaynta ee lakabka isku dhafan, microf ciyaaray ...
Kani waa jaakad qurux badan oo caadi ah, oo ka samaysan fiber superfine maadada synthetic. Ultrafine PU maqaar dardaro waa jiilka saddexaad ee maqaar macmal ah iyo nin-sameeyey. Dharka aan-tol-qabka lahayn ee saddex-cabbirkiisa iyo qaabdhismeedkiisa meed ayaa abuuraya xaaladda maqaar-gacmeedka si uu uga sarreeyo maqaarka dabiiciga ah ee maaddada salka. Shayga oo ay weheliso impregnation cusub oo PU slurry impregnation leh qaab dhismeedka furitaanka iyo farsamada farsamaynta ee lakabka isku dhafan, ciyaaray microfiber aagga dusha sare iyo imbibition biyo xoog leh. Tani waxay ka dhigtay darajada superfine PU maqaar dardaro leh inuu leeyahay hygroscopicity aad u fiican in fiber collagen fiber maqaar dabiici ah oo dabiici ah. Markaa iyada oo aan loo eegin microstructure-ka gudaha, ama muuqaalka jajabka muuqaalka iyo guryaha jireed iyo dadka xidhan raaxada, iwm. Waxay isbarbar dhigi karaan maqaarka dabiiciga ah ee aadka u dabiiciga ah. Intaa waxaa sii dheer, maqaarka maqaarka ee loo yaqaan 'superfine fiber synthetic skin' wuxuu ka sareeyaa maqaarka dabiiciga ah ee iska caabinta kiimikada, isku mid ahaanta tayada, la qabsiga wax soosaarka baaxadda weyn iyo biyuhu, caddeynta caaryada iyo dhinacyada kale. Mid kale, waxqabadka kala duwan ee wanaagsan ee maqaarka synthetic laguma beddeli karo maqaar dabiici ah. Waxaan ka falanqeyneynaa suuqa gudaha iyo kan caalamiga ah, qalabka PU ee synthetic ayaa sidoo kale beddelay maqaar dabiici ah oo aan haysan qalab aad u tiro badan. Isticmaalka maqaar macmal ah iyo maqaar macmal ah oo loogu talagalay boorsooyinka, dharka, kabaha, gawaarida iyo qurxinta alaabta guryaha ayaa si isa soo taraysa u aqoonsaday suuqa. Noocyadeeda kaladuwan ee arjiga, tirada weyn, noocyada dhaqanka iyo wixii la mid ah waa maqaar dabiici ah ma gaari karo.
Jaakadani 'PU jaket', waa mid fudud oo casri ah oo leh dheelitirro asymmetric ah iyo tolida gaarka ah ee garbaha iyo curcurka. Qaabka oo dhami waa mid qurxoon oo ku jira nooc muhiim ah oo aan jebin quruxda quruxda badan. Waxaa la sheegaa in dumarku dhammaantood ka samaysan yihiin biyo, waa habka saxda ah ee loo adeegsado jilicsanaanta si looga adkaado adkeysiga. Jiinyeerrada hore iyo qalabyada kale waxay ku jiraan midabyo jilicsan iyo gadaal si ay dharka oo dhan uga dhigaan mid tayo sare leh oo qurux badan Waxaa jira dahaadh gudaha. Waa la buuxin karaa iyadoo la buuxinayo si aan waafaqsanayn baahidaada. Maaddadu waa jilicsanaan jilicsan, cufnaanta sare ee dharka fiber-ka. Waa neefsasho iyo raaxo leh. Labada dhinac ee jirku waa jeeb jiinyeer fudud. Fudud laakiin kooban. Qaabka guud ee dharka waa mid fudud laakiin xarrago leh, oo leh tolida qaaska ah ee garbaha iyo garabka oo lagu daro moodada. Waxaa loo tixgelin karaa inay tahay dhar moodada ah oo qiimo u leh.
Hore: Jaakad Mudanayaal Biker ah
Xiga: Jaakadaha Dumarka Baaskiil PU
Jaakada dabaysha kaxaysan
Mudanayaal Miniskirt Fashion
Jaakada Mudanayaasha Baaskiilka
Jaakad Mudanayaal Biker ah